Ọnụ ego nke IBP Network: Ụzọ mgbochi afọ mmalite • Ọmụma ihe ịga nke ọma
Gbanye June 6, 2022, sonye na WHO IBP Network si 09:00 Washington / 14:00 Lagos / 15:00 Geneva / 16:00 Kampala maka webinar na Ụzọ mgbochi mgbochi Okwu mmalite iji gbasaa nhọrọ: Ntuziaka atụmatụ atụmatụ, nkeji nkeji kacha ọhụrụ nke ha Usoro webinar omume mmetụta dị elu.
Ụzọ mgbochi mgbochi Okwu mmalite iji gbasaa ntụzịaka atụmatụ atụmatụ nhọrọ bụ ka e bu n'obi duo ndị njikwa mmemme, ndị na-eme atụmatụ, ndị na-eme amụma mba, na ndị ọzọ metụtara ya site na usoro atụmatụ iji hazie iwebata ụzọ mgbochi mgbochi site na ọwa ohere ọha na nke onwe.. Emepụtara ntuziaka a site na ntụle ya na ndị ọkachamara nka na ụzụ wee chịkọta ntụzịaka sitere na akụrụngwa isi maka iwebata usoro. Ọ na-enye nkọwa na njikọ na akụrụngwa ndị ọzọ maka omimi na nkọwa zuru oke.
Budata Usoro mgbochi mgbochi Okwu mmalite SPG Ebe a, na deba aha maka webinar taa. Anyị na-atụ anya nsonye gị!
Maka ozi ndị ọzọ gbasara HIP na ịhụ gara aga webinar, biko gaa na: https://www.fphighimpactpractices.org/.
Twitter: #HIPs4FP na @IBP_network
pịa ebe a maka mpaghara oge mpaghara maka webinar.